Baahida loo qabo darbiga fiidiyowga ah ee P3.9 ayaa ka badan inta la keenayo, waxaa jira 500 mitir oo laba jibbaaran oo hogaaminaya waa la iibiyay maalmahan, sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan keydinno 500 mitir oo squre mitir kale oo fiidiyowgan ah.
Sababtoo ah qaybtani waxay caan ku ahayd? Daraasad xiiso leh daraasad ayaa muujineysa in shaashadda kirada gudaha ee gudaha ay si dhakhso leh u korayso, P3.9 waxay qabsatay suuqa kirada.
P3.9 Gudaha gidaarka fiidiyowga ee fiidiyowga oo leh nidaam quful deg deg ah oo ka dhigaya flatness xitaa ka sii fiican. Naqshadaynta elektarooniga ah, qaybtu waxay isticmaashaa heerka cusbooneysiinta sare ee IC iyo wareegga ciribtirka Shadow, labadan astaamood ee horumarsan waxay dammaanad ka qaadayaan saamaynta muuqaalka iyo khadka cirfiidka ee shaashadda marka aad si dhow u aragto.
Xirmada ayaa loo hagaajiyay armaajooyinka dhacdooyinka gudaha iyo qaybaha dayactirka ayaa lagu kordhiyay tirada, ma sameyn karno 100% wax soo saar dhameystiran, in kastoo aan sameyneyno sida ugu wanaagsan ee aan ku qancin karno.